MAANHADAL: Muxuu ka dhigan yahay Habraaca cusub ee ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya? (daawo) – Radio Daljir
MAANHADAL: Muxuu ka dhigan yahay Habraaca cusub ee ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya? (daawo)
Agoosto 27, 2021 2:36 g 0
MAANHADAL: Muxuu ka dhigan yahay Habraaca cusub ee ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya? Mase noqon karaa Harbraac dalka gaarsiin kara Doorasho si hufan u dhacda, waa Mowduuca Barnaamijka Maanhadal ee Jimacaha oo ay marti ku yihiin Khabiiro iyo aqoonyahano falanqeeya arimaha Siyaasada.
Waxaa soo jeedinaya Khadar Cawl Ismaaciil.
GAROWE: Afar qof oo ay ku qaraxday Kiimiko oo la dhigay Isbitaalka dowladda (daawo)
Nabadda Gaalkacyo Warbaahintu kama aysan Qaadan Door Nabadeed